.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: YouTube က Video တွေကို Mp3 Mp4 ဖော်မက်မျိုးစုံ လွယ်ကူစွာ ဒေါင်းယူနည်း
YouTube က Video တွေကို Mp3 Mp4 ဖော်မက်မျိုးစုံ လွယ်ကူစွာ ဒေါင်းယူနည်း
ကျွန်တော် ဒီနေ့ YouTube က Video တွေကို Mp3, Mp4 ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဖော်မက်မျိုးစုံ လွယ်ကူစွာ ဒေါင်းယူနည်းလေး
ပြောပြပေးပါမယ်။ ဘာ Downloader ဆော့ဝဲလ် ၊ ဘာ Add On မှ မသုံးပါဘူး။ ဆိုဒ်တစ်ခုမှာ သွားပြီး လုပ်ယူတာပါ။
YouTube to mp3 ပြောင်းပေးတဲ့ ဆိုဒ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဆိုဒ်တော်တော်များများက Convert လုပ်ရတယ်။
ပြီးတော့ 128kbps နဲ့ပဲ ဒေါင်းဖို့ပေးတာများတယ်။ အနော့်လိုင်းလည်း အရမ်းကြီးမဆိုးပေမယ့် သိပ်တော့မမြန်ပါဘူး။
မလိုအပ်ပဲ Convert လုပ်နေရတော့ လိုင်းစားသလို အချိန်လည်း ကုန်တယ်။ ပြီးတော့ ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးနေတော့ ပိုဆိုးပြီ။
Downloader ဆော့ဝဲလ်တွေကလည်း ကြောင်တောင်တောင် ၊ Add On တွေကလည်း Browser Version မြင့်လာတော့
အလုပ်မလုပ်တော့တာလည်း ရှိတယ်။ ခုပြောမယ့် ဆိုဒ်လေးက Convert လည်းမလုပ်နေဘူး။ Mp3 သီချင်းဆိုရင်လည်း
64kbps, 96kbps, 128kbps, 320kbps စတဲ့ Audio Qualities မျိုးစုံကို ကြိုက်တာနဲ့ ရွေးပြီး ဒေါင်းယူလို့ရတယ်။ ပြီးတော့
Flv , Mp4 စတဲ့ Video ဖော်မက်တွေကို ကွာလတီမျိုးစုံနဲ့ ဒေါင်းယူလို့ရတော့ အရမ်း အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ဆိုဒ်လေးပါပဲ။
အောက်မှာ ကျွန်တော် မိစန္ဒီရဲ့ ရေခဲရိုက်အပြုံး ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို YouTube ဆိုဒ်က လင့်ယူပြီး ဒေါင်းထားတာပါ။
ပထမဦးဆုံး သီချင်းတွေကို YouTube ဆိုဒ်မှာ သွားပြီးတော့ Search Box မှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ သီချင်းကို ရိုက်ပြီး ရှာပါ။
တွေ့ပြီဆိုရင် အဲဒီ YouTube က Video လင့်ကို ကော်ပီကူးပါ။ [အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်နော်..။]
ပြီးရင် အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ဆိုဒ်ကို သွားပြီးတော့ အောက်မှာ ပြထားတဲ့ Box လေးထဲကို ခုန ကော်ပီကူးထားတဲ့
လင့်ထည့်ပြီး dirpy ကို နှိပ်ပါ။ အဲဒါဆို Mp3, Mp4 ဒေါင်းလုပ် လုပ်ရမယ့် စာမျက်နှာကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
Mp3 ဒေါင်းမယ်ဆိုရင် Audio Qualities ကိုတော့ ကိုယ်လိုချင်တာ ရွေးပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ 64kbps ပဲ ရွေးလိုက်တယ်။
အဲဒါက ဆိုဒ်ချုံ့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် လိုင်းသိပ်မကောင်းလည်း ဒေါင်းရတာလွယ်ပါတယ်။ Title, Artist, Album မှာ
နာမည်တွေ ပြင်ရေးချင်ရေးပါ။ ပြီးရင် Record ကို နှိပ်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် ဒေါင်းလုပ် ဘောက်စ်လေး တက်လာပါလိမ့်မယ်။
Video ဖော်မက်ဒေါင်းချင်တာဆိုရင်လည်း အောက်ဆုံးမှာ ရှိပါတယ်။ ကြိုက်တာကို အလွယ်တကူ ဒေါင်းယူလိုက်ရုံပါပဲ။
အနော်ကတော့ Mp3 ကို 64kbps နဲ့ရွေးပြီး ဒေါင်းလိုက်ပါတယ်။ Save File ရွေးပြီး OK ကို နှိပ်ပါ။
အခုလို ဒေါင်းနေပါပြီဗျာ.. ကဲ အဲလောက်ဆို အဆင်ပြေပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ပုံလေးတွေနဲ့ သေချာရှင်းပြထားပါတယ်။
YouTube က Video တွေကို မဒေါင်းတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ ဒီနည်းလေးကို အသုံးပြုပြီး ဒေါင်းယူနိုင်ပါကြောင်း...။
အားလုံးပဲ အစစအရာရာ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့.. ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးပါ။
Posted by Thurainlin at 07:28
Labels: Website, You Tube, နည်းပညာ